မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာ စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကို ချဉ်းကပ်မှု ပုံစံတစ်ခုတည်းဖြင့် ဆောင? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာ စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကို ချဉ်းကပ်မှု ပုံစံတစ်ခုတည်းဖြင့် ဆောင?
မြန်မာနိုင်ငံမူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာစိန်ခေါ်မှုကို ချဉ်းကပ်မှု ပုံစံတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် နည်းလမ်းမျိုးစုံနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်က ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က နေပြည်တော် Kempimski Hotel တွင် ကျင်းပသည့် ရှမ်းပြည်နယ်လွိုင်လင် ဟိုပုံးရွာငံမြို့ နယ်များမှ ဘိန်းအစားထိုး ကော်ဖီစိုက်တောင်သူ၊ Green Gold သမဝါယမအသင်းနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ Malogo ကော်ဖီကုမ္ပဏီတို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေး ထိုးပွဲ၌ ယင်းကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအခမ်းအနားတွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ အောင်က မြန်မာနိုင်ငံမူးယစ်ဆေး ဝါးပြဿနာရဲ့ စိန်ခေါ်မှုဟာ အလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှပါတယ်။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုပြဿနာရဲ့စိန် ခေါ်မှုတွေ ဓာတုပစ္စည်းများ တရားမဝင်သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှု အပါအဝင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ထုတ်လုပ်သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနဲ့ ယင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်စတဲ့ စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကိုချဉ်းကပ်မှု ပုံစံတစ်ခုတည်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ UNODC ရဲ့ကူညီပူး ပေါင်းမှုနဲ့အမျိုးသားမူးယစ်ဆေး ဝါးထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒသစ်ကို ရေးဆွဲအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမူဝါဒသစ်ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရေးနှင့် အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးသုံးစွဲမှု လျှော့ချရေး နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်လျှော့ချ ရေးနိုင်ငံတကာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဟန်ချက်ညီညီပေါင်းစပ်နိုင်ရေးဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ဇွန်လမှစ၍ နိုင်ငံ တော်အစိုးရမှ လူထုအဖွဲ့အစည်း များ ကျန်းမာရေးလူမှုရေးတားဆီး နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင်ကဏ္ဍာပေါင်းစုံမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် အစိုးရဌာနများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ချဉ်းကပ်မှုပုံစံသစ်များနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခေါ်ယူဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ကျင်းပသည့် စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအရ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီကော်ဖီစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ဈေးကွက်တင်ပို့မှုအပြင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက်ဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်လွိုင်လင် ဟိုပုံးရွာငံမြို့နယ်တွင် ဘိန်းအစားထိုးကော် ဖီစိုက်ပျိုးခြင်းကို UNODC ၏ ထောက်ပံ့မှု နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ကူညီမှုတို့ဖြင့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က စတင်၍စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် လွိုင်လင်ဟိုပုံး ရွာငံမြို့နယ်များရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၆ဝ မှ ကော်ဖီစိုက်တောင်သူ ၁၂၄၅ ဦးတို့က ကော်ဖီစိုက်ဟက်တာ ၉၅၃ ဟက်တာ ၂၃၈၂ ဧက စိုက်ပျိုးကာ အများဆုံးကော်ဖီထုတ်လုပ်နိုင်မှုတန်ချိန် ၁ဝဝဝ ကို နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘိန်းအစားထိုးကော်ဖီစိုက်တောင်သူ Green Gold ကို သမဝါယမ အသင်းမှ သိရသည်။
ကားလမ်းတွေကို ထပ်တိုးချဲ့ ပြီး တံတားတွေကို နှစ်စင်းအပြိုင် ဆောက်စေချင်တယ် ဆိုတဲ့ ဆုမြတ်နု??